လူနာတင်ယာဉ်ဝယ်လှူဖို့အတွက် သူမရဲ့အလှူလေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်လှူဒါန်းပေး ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထား တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ - Tha Dinn Oo
Tha Dinn Oo
လူနာတင်ယာဉ်ဝယ်လှူဖို့အတွက် သူမရဲ့အလှူလေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်လှူဒါန်းပေး ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထား တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ ဆောင်းယွန်းစံက သူမမှာရှိတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေအပြင် အခြားဝတ်စုံလေးတွေကို ရောင်ပြီး ရတဲ့အမြတ်ငွေလေးတွေနဲ့ လူနာတင်ယာဉ်ဝယ်လှူဒါန်းဖို့ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယခုမှာတော့ ဆောင်းယွန်းစံ က ပထမဆုံးရောင်းသွားမယ့် အကျီလေးကိုဝတ်ပြီး အသည်းယားစရာအမူအရာလေးတွေနဲ့ ပို့စ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေနဲ့လည်း ဆောင်းယွန်းစံ က “Hello လူနာတင်ယာဉ်လှူဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေရှာတဲ့အနေဖြင့် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီ Star Generation အင်္ကျီလေးတွေရောင်းပါမယ်နော် …ဒီအင်္ကျီလေးတွေက မနှစ်ကဆောင်းတို့ Star Generation အဖွဲ့လေးရဲ့ ပုံလေးတွေပါတဲ့ အင်္ကျီလေးပါ.. အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ၁၅၀၀ကျပ် ပဲရောင်းပါမယ်ရှင့်..ရောင်းလိုရတဲ့ငွေအားလုံးကို လှူသွားမှာပါ..ဆောင်းဆီမှာ အားလုံး အထည် (၁၀၀)ရှိပါတယ်ရှင့်….အရောင်လေးတွေနဲ့လည်း ရှိပါတယ်..အမှတ်တရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလှူအတွက် အထောက်အပံ့ ရအောင်ဖြစ်ဖြစ် ကူညီပြီး လှူဒါန်းပေးပါဦးရှင့်…
လူတစ်ယောက်ကို တစ်ထောင်ကျပ်လည်းအလှူခံပါတယ် အခုဆို လူအယောက်(၅၀၀၀) လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်နော်..အဲ့လို လူ အယောက် (၅၀၀၀) ပြည့်ဖို့ တစ်ယောက်ထဲမရဘူး ဆောင်းယွန်းနဲ့သိတဲ့ လူတစ်ယောက်က တစ်ထောင်ကျပ် လှူလိုက်ရင် လှူတဲ့ လူက တခြားလူသိအောင် ထပ်လုပ်ရင်း ထပ်လှူသွားမှ အဆင်ပြေမှာပါ ငွေတစ်ထောင်နဲ့ လူနာတင်ကားလေးကို အားလုံးစုပေါင်းအားနဲ့ လှူရအောင်နော် …” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း လူနာတင်ကားလေး အမြန်ဆုံး လှူဒါန်းနိုင်အောင် ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါဦးနော်….။.
Source – Saung Yoon San fb page
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး ဆောငျးယှနျးစံ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှာတော့ ဆောငျးယှနျးစံက သူမမှာရှိတဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေးတှအေပွငျ အခွားဝတျစုံလေးတှကေို ရောငျပွီး ရတဲ့အမွတျငှလေေးတှနေဲ့ လူနာတငျယာဉျဝယျလှူဒါနျးဖို့ ပရိသတျတှကေို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ယခုမှာတော့ ဆောငျးယှနျးစံ က ပထမဆုံးရောငျးသှားမယျ့ အကြီလေးကိုဝတျပွီး အသညျးယားစရာအမူအရာလေးတှနေဲ့ ပို့ဈပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံလေးတှနေဲ့လညျး ဆောငျးယှနျးစံ က “Hello လူနာတငျယာဉျလှူဖို့အတှကျ ရနျပုံငှရှောတဲ့အနဖွေငျ့ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဒီ Star Generation အင်ျကြီလေးတှရေောငျးပါမယျနျော …ဒီအင်ျကြီလေးတှကေ မနှဈကဆောငျးတို့ Star Generation အဖှဲ့လေးရဲ့ ပုံလေးတှပေါတဲ့ အင်ျကြီလေးပါ.. အင်ျကြီတဈထညျကို ၁၅၀၀ကပျြ ပဲရောငျးပါမယျရှငျ့..ရောငျးလိုရတဲ့ငှအေားလုံးကို လှူသှားမှာပါ..ဆောငျးဆီမှာ အားလုံး အထညျ (၁၀၀)ရှိပါတယျရှငျ့….အရောငျလေးတှနေဲ့လညျး ရှိပါတယျ..အမှတျတရအနနေဲ့ပဲဖွဈဖွဈ အလှူအတှကျ အထောကျအပံ့ ရအောငျဖွဈဖွဈ ကူညီပွီး လှူဒါနျးပေးပါဦးရှငျ့…
လူတဈယောကျကို တဈထောငျကပျြလညျးအလှူခံပါတယျ အခုဆို လူအယောကျ(၅၀၀၀) လောကျပဲလိုပါတော့တယျနျော..အဲ့လို လူ အယောကျ (၅၀၀၀) ပွညျ့ဖို့ တဈယောကျထဲမရဘူး ဆောငျးယှနျးနဲ့သိတဲ့ လူတဈယောကျက တဈထောငျကပျြ လှူလိုကျရငျ လှူတဲ့ လူက တခွားလူသိအောငျ ထပျလုပျရငျး ထပျလှူသှားမှ အဆငျပွမှောပါ ငှတေဈထောငျနဲ့ လူနာတငျကားလေးကို အားလုံးစုပေါငျးအားနဲ့ လှူရအောငျနျော …” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျတှလေညျး လူနာတငျကားလေး အမွနျဆုံး လှူဒါနျးနိုငျအောငျ ဆုမှနျကောငျးလေးတောငျးပေးလိုကျပါဦးနျော….။.
ဆေးရုံတကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ငါးထောငျတနျတှအေပွညျ့ပါတဲ့ပိုကျဆံပနျးစညျးနဲ့ Surpriseလုပျခံလိုကျရလို့ ပြျောနတေဲ့အိအိတုနျ
Posted on December 4, 2020 Author admin
အိအိတုနကှတော့ ဇာတပှို့သရုပဆှောငတှဈဦးအဖှဈ ဗီဒီယိုနဲ့ရုပရှငဇှာတကှားပေါငှးမှားစှာမှာ ပါဝငခှဲ့လို့ ပရိသတတှနေဲ့ အရမှးကိုရငှးနှီးနတောပဲ ဖှဈပါတယှ ။ အနုပညာအလုပတှကေို နှဈနဲ့ခှီကှာအောငလှုပကှိုငခှဲ့တဲ့ အိအိတုနကှ သူမကိုခစှခှငအှားပေးတဲ့ ပရိသတတှကေိုလညှး ပိုငဆှိုငခှဲ့ရတာ ဖှဈပါတယှ ။ အခုခှိနမှာ အိအိတုနကှ ကိုယပှိုငစှီးပှားရေးလုပငှနှးဖှဈတဲ့ Online Shopping အလုပကှိုသာ အာရုံစိုကပှီး ကှိုးစားပမှးစား လုပကှိုငနှတော ဖှဈပါတယှ ။ လကရှိမှာတော့ အိအိတုနကှ ဒုတိယမှောကရှငသှေးလေးဖှဈတဲ့ သမီးငယလှေးကို အောငမှငစှာမှေးဖှားနိုငခှဲ့ပှီ ဖှဈပါတယှ ။ ကလေးမှေးပှီး ဆေးရုံမှာခဏအနားယူနတေဲ့ အိအိတုနကှ သူမရဲ့လှုပရှားမှုတှအေားလုံးကို လူမှုကှနယှကစှာမကှနှာကတစာဆငှ့ မှဝပေေးနတော ဖှဈပါတယှ ။ အခုလညှး အိအိတုနကှ ဆေးရုံမှာနနရငှေေး ပိုကဆှံငါးထောငတှနတှအပှညပှေ့ါတဲ့ ပနှးစညှးလှလှလေးနဲ့ စပရိုကလှုပခှံလိုကရှလို့ အရမှးပှောရှငနှတောပဲ ဖှဈပါတယှ ။ ဒီအကှောငှးကို အိအိတုနကှ “မမသိငှဂွီရေ ကှေးဇူးအမှားကှီးပါ […]
အ စိုးရ ကို ဆဲနေတဲ့ သူတွေ အရင်ခေတ် က ဘာလို့ ပါးစပ်ပိတ်နေ လဲ လို့ မင်း သားကြီးဦးကျော်သူမေးပြီ (ရုပ်/သံ)
အ စိုးရ ကို ဆဲနေတဲ့ သူတွေ အရင်ခေတ် က ဘာလို့ ပါးစပ်ပိတ်နေ လဲ လို့ မင်း သားကြီးဦးကျော်သူမေးပြီ (ရုပ်/သံ) ကိုယ့် ခံယူချက်က ခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ကျွန်တော် တို့ဆို အရင်အစိုးရ လက်ထက်တွေတည်းက ဘယ်သူမှ မပြော ဆိုရဲတဲ့ ကာလ တည်းက အများအကျိုးအတွက်ကို သယ်ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အဆင်ပြေ မယ့် အဖွဲ့အစည်း ကို မဲပေးရမှာ ပဲ။ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ပါတီတိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုမယ့်သူကို မဲပေး ရမှာပဲ။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- […]
သိနျးတဈသောငျးခှဲ ပေါကျသူမှ ဘုရားတညျရနျ အုတျရိုးတူးရာ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးမြားတှေ့
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ပေါက်သူမှ ဘုရားတည်ရန် အုတ်ရိုးတူးရာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများတွေ့ သြဂုတ်(၂၆) AlinnMyay(အလင်းမြေ) စစ်ကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ် ဝရာကျေးရွာနေ(၁၇) ကြိမ်မြောက် သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆုပေါက်ခဲ့သူတို့က ဘုရားတည်ရန် အုတ်ရိုးတူးရာမှရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ သြဂုတ်လ(၂၅)ရက်နေ့လည်ကတူးဖော်တွေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။ “ဝရာကျေးရွာမှာ သမိုင်းဝင်ရွှေမုဌောဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ကပ်ရက်မှာ ဘုရားကုန်းကြီးရှိတယ်။သစ်ပင်တွေပေါက်နေတာကြာပြီ။ဦးဇင်းတို့ရွာက ၁၇ ကြိမ်မြောက်မှာ သိန်း၁၅ဝဝဝပေါက်တယ်။ပေါက်တဲ့ကိုသောင်းထိုက်ဦးတို့၊မဆုမြတ်မော်မောင်နှမတစ်စုကဒီရှေးဟောင်းဘုရားကြီးကိုပြင်မယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ဒီဝါတွင်းကိုတော့ အုတ်ရိုးတွေဖော်မယ်ပေါ့။ဝါကျွတ်မှပဲဘုရားတည်မယ်ပေါ့။ဒီနေ့မှာ ဘတ်ဟိုးကော်တယ်။ဒီနေ့လူတွေနဲ့အုတ်ရိုးတွေတူးရင်းနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိခဲ့တာပါ”ဟု ဦးဇင်း ဦးဝေပုံကမိန့်ကြားသည်။ တွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များမှာ ရှေးဟောင်းဘုရားများ၊ကျောက်ဆင်းတုဘုရား၊စာများ၊အိုးများ၊ကြေးဆင်းတုများဖြစ်ပြီး မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်မည်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်စဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “ဘုရားတွေကတော့ လက်ကျိုးတာတွေရော၊ခေါင်းပြတ်တာတွေရော ပါတယ်။ စာတွေတော့ ပါတယ်။ တချို့ကတော့ အင်းဝခေတ်ကဟာလို့တော့ပြောတယ်။ သေချာမကြည့်ရသေးဘူး။ အရင်ရွှေမုဌောဘုရားကြီးတုန်းက ငလျင်လှုပ်တုန်းက ဓာတ်တော်တွေ့တယ်၊အဲဒါတွေလည်း ဘုရားထည့်တယ်။အခုတွေ့ဟာကလည်း ဌာပနာထဲထည့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်”ဟု ဆရာတော်ကမိန့်ကြားသည်။ Unicode သိနျးတဈသောငျးခှဲ ပေါကျသူမှ ဘုရားတညျရနျ အုတျရိုးတူးရာ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးမြားတှေ့ သွဂုတျ(၂၆) AlinnMyay(အလငျးမွေ) စဈကိုငျးတိုငျးကနီမွို့နယျ ဝရာကြေးရှာနေ(၁၇) […]
(၁၇) နှဈပွညျ့တော့မယျ့ ခဈြသူက လူကွီးဖွဈတော့မယျဆိုတဲ့စကားအပျေါ အရှနျးဖောကျခဲ့တဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ပိုပို
မို့မို့မွငျ့အောငျမိခငျကွီးရဲ့ နောကျဆုံးခရီးကို ဖေးမကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကြျောသူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသငျးသားမြား
အနီရဲရဲ ဖကျရှငျလေး နဲ့ ပုရိသတှေ ကွှဆေငျးသှားစမေဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျ ရဲ့ ဆကျဆီ ကကြ လှနေ တဲ့ ပုံရိပျမြား
ခရမျးရောငျ ကိုယျကပျြ ဂါဝနျလေး ၀တျဆငျကာ ခန်ဓာကိုယျလေး ကို ပှတျသပျပွီး ဆှဲဆောငျမှုပိုနတေဲ့ ပိုပို ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယို
တဖကျတညျးကိတျတယျ လို့ ပွောတဲ့သူတှေ ကို သူမ ရဲ့ ရှရေငျအမွှာ နှဈဖကျလုံးကိတျကွောငျး သကျသေ ပွလိုကျတဲ့ ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့
အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေး နဲ့ ကိုရီးယားမလေေးတဈယောကျလို လှနတေဲ့ စုလှိုငျဝငျး
ကိုဗဈ တတိယလှိုငျး လာပါက နညျးလမျး နှဈသှယျနဲ့ ရငျဆိုငျသှားမယျ လို့ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးပွော
ပရိသတျတှတေောငျးဆိုတဲ့အတိုငျး စညျသူဝငျးက သဇငျထူးမွငျ့ကိုခဈြတယျပွောခဲ့ရပွီး အောငျမငျးခနျ့က ယှနျးယှနျးကိုဖကျပွခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုလေး
ပါရဂူဘှဲ့တှရေရှိပွီး နိုငျငံခွားမှာတာဝနျကနြတေဲ့ ဒေါကျတာခြောခြောလေးနဲ့ခဈြသူဖွဈပွီးမှ အပွငျးအထနျဝဖေနျခံနရေတဲ့ မမေီကိုကို
နှဈသဈ မှာ အခဈြအသဈစကျစကျ ခဈြသူကောငျမလေးကို တရားဝငျခြ ပွလိုကျတဲ့ နခွေညျဦးရဲ့ ရညျးစားဟောငျး အောငျနှဦေး
အင်ျဂလနျက ကိုဗဈပိုးသဈဟာ တှယျကပျအားပိုကောငျးတဲ့အတှကျ မပေါ့ဆကွဖို့ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးပွော
လာမညျ့ လေးလ အတှငျး အခြိနျအခါ မဟုတျ စီးပှားဖကျြမိုးမြား ရှာနိုငျမညျ (တောငျသူမြား သတိထားရနျလို)
သူမ LIVE VIDEO နဲ့ ပကျသကျပွီး ပှဲကွမျး လိုကျတဲ့ ပိုးကွာဖွူခငျ
တငျးကိတျ လှပလှနျးနတေဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ အမိုကျစား ပိုဈ့ပေးကွမျးနေ တဲ့ သဇငျဦး